သင့်ကို လုံးဝ ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ ခံစားစေမည့် သဘာဝအလှဓာတ်ပုံများ – CantWait2Say
သင့်ကို လုံးဝ ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ ခံစားစေမည့် သဘာဝအလှဓာတ်ပုံများ
1.This blooming marvelous flower.
ကမ္ဘာမြေကြီး ငြိမ်းချမ်းဖို့ အတွက် ပန်းတွေ ပွင့်လာသလိုလို၊နံနက်ခင်းရဲ့  အလင်းရောင်ကို ကြိုဆိုဖို့ အတွက် ပဲ ပန်းတွေ ပွင့်နေရသလိုလို ၊နေု့ရက်တိုင်း မှာ တာဝန်အရပွင့်နေတတ်တဲ့ ပန်းတွေ ကို တော့ လူသားတွေ အများစု နှစ်သက်တတ်ကြပါတယ်။
2.The visual glory that is this apartment block of dreams.
တိုက်တာအဆောက်အဦးရဲ့  အထပ်အထပ်တွေကို မြင်နေရာတာဟာ အိမ်မက်ထဲမှာတောင် ကျက်သရေရှိနေသလိုလိုပါပဲ။လူအများစုကတော့ ဂုဏ် သရေရှိတဲ့ မြင်ကွင်းလို့ မှတ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။
3.Every petal in perfect alignment. Thanks, Mother Nature.
ပွင့်ချပ်၊ပွင့်ဖတ်တိုင်းက တောက်ပနေတဲ့ ပန်းအမျိုးအစားတစ်ပွင့်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူက ကဗျာဆန်ဆန် ဖော်ပြထားတာပါ။ပန်းတွေ ပွင့်ပြီးရင် အသီးသီးကြတာကို ဖော်ပြလိုပုံရပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ ကတော့ မိခင်တို့ ရဲ့  သဘာဝပါပဲ။
4 The picture that launched 1,000 succulent enthusiasts.
ပွင့်ချပ် ၁၀၀၀ နဲ့ ပန်းလို့ တောင်တင်စားကြရတဲ့ ပန်းပွင့်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြထားတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရုတ်တရက်ကြည့်ပါက ထူးခြားမှု ရှိနေပါတယ်။စိတ်တော့ကြည်လင်စေတာအမှန်ပါပဲ။
5.We feel complete.
ခြောက်ဘက်မြင် အံ့စာတုံးတစ်တုံးကို လုံးဝ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အနေအထားနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားတာပါ။အဲ့ဒီအံစာတုံးကစားနည်းက တော့ ၆ မျက်နှာ လုံး သူ့ နေရာနဲ့ သူရောက်ရှိသွားပါက ကစားသူကို စိတ်ကြည်နှုးပျော်ရွှင်စေပါတယ်။
6.We can’t cope if they’re alphabetized, too!
လူ့ဘ၀မှာ လူတိုင်းနီးပါး စာအုပ်စာပေတွေ ဖတ်ကြရပါတယ်။စာအုပ်အများအပြားတစ်စုတဝေးတဲ့ ရှိတဲ့ နေရာမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြထားတာကတော့ လှပတဲ့စိတ်ကူးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ စာအုပ်တွေ များတာကြောင့် အဖုံးကို ကောင်းမွန်စွာ မဖုံးနိုင်ခဲ့တဲ့ ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
7.Perfect until the tide comes in…
မြစ်ကမ်းစပ် က ၀င်္ကပါ ပုံစံ စက်ဝိုင်းတစ်ခုကို ရိုက်ယူထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကတော့ မြစ်ရေ(သို့မဟုတ်)ဒီရေ မလာမချင်း အသုံးဝင်နေပုံပါပဲ။ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကနေ စီးဆင်းလာတဲ့ ခံစားမှု ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးကတော့ အဲ့ဒီဝင်္ကပါ လေးက ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
8.THIS crispbread tower. Any food tower, if we’re honest.
မုန့်တွေ နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ တြိဂံတစ်ခုပုံစံ တာဝါ တိုင်ကတော့ ပေါင်မုန့် အတွန့်ကလေးတွေနဲ့ တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်ကောင်းခြင်းဟာ လူတွေ ကို ဆွဲဆောင်မှု တစ်ခုပါပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရိုးရိုးသားသားဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပါ။
9.Vertigo inducing, but oh so worth it.
ပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့ အ၀ါရောင် ဆန်ဆန် တိုက်တန်း ၂ ခု ကြားက အပေါင်းလက္ခဏာပုံစံ ကို ဖော်ပြထားတဲ့ ဒီဇိုင်းကတော့ လူတွေ ကို မူးဝေစေအောင်ဖန်တီးစေနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကြည့်လို့တော့ ကောင်းမွန်ပါတယ်။
10 This architect hasaplace in our hearts.
ဗိသုကပညာနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ မိုးမျှော်တိုက်တာတစ်ခုကို ဖော်ပြထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ လူတိုင်း ရင်သပ်ရှု့ မောရမည့် ခံစားမှုမျိုးပေးနိုင်ပါတယ်။လက်ရာမြောက်လွန်းလှတဲ့ ဗိသုကာ ဒီဇိုင်းပါပဲ။
သငျ့ကို လုံးဝ ပွီးပွညျ့စုံတယျလို့ ခံစားစမေညျ့ သဘာဝအလှဓာတျပုံမြား
ကမ်ဘာမွကွေီး ငွိမျးခမျြးဖို့ အတှကျ ပနျးတှေ ပှငျ့လာသလိုလို၊နံနကျခငျးရဲ့အလငျးရောငျကို ကွိုဆိုဖို့ အတှကျ ပဲ ပနျးတှေ ပှငျ့နရေသလိုလို ၊နေု့ရကျတိုငျး မှာ တာဝနျအရပှငျ့နတေတျတဲ့ ပနျးတှေ ကို တော့ လူသားတှေ အမြားစု နှဈသကျတတျကွပါတယျ။
တိုကျတာအဆောကျအဦးရဲ့အထပျအထပျတှကေို မွငျနရောတာဟာ အိမျမကျထဲမှာတောငျ ကကျြသရရှေိနသေလိုလိုပါပဲ။လူအမြားစုကတော့ ဂုဏျ သရရှေိတဲ့ မွငျကှငျးလို့ မှတျယူကွတာဖွဈပါတယျ။
ပှငျ့ခပျြ၊ပှငျ့ဖတျတိုငျးက တောကျပနတေဲ့ ပနျးအမြိုးအစားတဈပှငျ့ကို ဓာတျပုံရိုကျကူးသူက ကဗြာဆနျဆနျ ဖျောပွထားတာပါ။ပနျးတှေ ပှငျ့ပွီးရငျ အသီးသီးကွတာကို ဖျောပွလိုပုံရပါတယျ။ဥပမာအနနေဲ့ ကတော့ မိခငျတို့ ရဲ့သဘာဝပါပဲ။
ပှငျ့ခပျြ ၁၀၀၀ နဲ့ ပနျးလို့ တောငျတငျစားကွရတဲ့ ပနျးပှငျ့ကို ဓာတျပုံရိုကျပွထားတာကတော့ စိတျဝငျစားစရာပါ။ဘာပဲဖွဈဖွဈ ရုတျတရကျကွညျ့ပါက ထူးခွားမှု ရှိနပေါတယျ။စိတျတော့ကွညျလငျစတောအမှနျပါပဲ။
ခွောကျဘကျမွငျ အံ့စာတုံးတဈတုံးကို လုံးဝ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ အနအေထားနဲ့ ဓာတျပုံရိုကျယူထားတာပါ။အဲ့ဒီအံစာတုံးကစားနညျးက တော့ ၆ မကျြနှာ လုံး သူ့ နရောနဲ့ သူရောကျရှိသှားပါက ကစားသူကို စိတျကွညျနှုးပြျောရှငျစပေါတယျ။
လူ့ဘဝမှာ လူတိုငျးနီးပါး စာအုပျစာပတှေေ ဖတျကွရပါတယျ။စာအုပျအမြားအပွားတဈစုတဝေးတဲ့ ရှိတဲ့ နရောမှာ ဓာတျပုံရိုကျပွထားတာကတော့ လှပတဲ့စိတျကူးပါပဲ။ဒါပမေဲ့ စာအုပျတှေ မြားတာကွောငျ့ အဖုံးကို ကောငျးမှနျစှာ မဖုံးနိုငျခဲ့တဲ့ ပုံစံဖွဈပါတယျ။
မွဈကမျးစပျ က ၀င်ျကပါ ပုံစံ စကျဝိုငျးတဈခုကို ရိုကျယူထားတဲ့ ဓာတျပုံကတော့ မွဈရေ(သို့မဟုတျ)ဒီရေ မလာမခငျြး အသုံးဝငျနပေုံပါပဲ။ဓာတျပုံတဈပုံကနေ စီးဆငျးလာတဲ့ ခံစားမှု ထူးထူးဆနျးဆနျးလေးကတော့ အဲ့ဒီဝင်ျကပါ လေးက ပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
မုနျ့တှေ နဲ့ တညျဆောကျထားတဲ့ တွိဂံတဈခုပုံစံ တာဝါ တိုငျကတော့ ပေါငျမုနျ့ အတှနျ့ကလေးတှနေဲ့ တညျဆောကျနိုငျပါတယျ။တကယျတော့ ဓာတျပုံရိုကျခကျြကောငျးခွငျးဟာ လူတှေ ကို ဆှဲဆောငျမှု တဈခုပါပဲ။ဘာပဲဖွဈဖွဈ ရိုးရိုးသားသားဓာတျပုံရိုကျလိုကျပါ။
ပုံမှာဖျောပွထားတဲ့ အဝါရောငျ ဆနျဆနျ တိုကျတနျး ၂ ခု ကွားက အပေါငျးလက်ခဏာပုံစံ ကို ဖျောပွထားတဲ့ ဒီဇိုငျးကတော့ လူတှေ ကို မူးဝစေအေောငျဖနျတီးစနေိုငျတဲ့ ဓာတျပုံဖွဈပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ကွညျ့လို့တော့ ကောငျးမှနျပါတယျ။
ဗိသုကပညာနဲ့ တညျဆောကျထားတဲ့ မိုးမြှျောတိုကျတာတဈခုကို ဖျောပွထားတဲ့ ဓာတျပုံဟာ လူတိုငျး ရငျသပျရှု့ မောရမညျ့ ခံစားမှုမြိုးပေးနိုငျပါတယျ။လကျရာမွောကျလှနျးလှတဲ့ ဗိသုကာ ဒီဇိုငျးပါပဲ။
ဝါဆိုမိုးဦးကတော့ ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာ အပန်းဖြေနေတဲ့ ပုံတွေနဲ့အတူ တစ်ပတ်လောက် ပုံမတင်ဘဲနေလိုက်တာ ဝလာတယ်လို့ ပြောပြောဆိုဆို တင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ် ဝါဆိုမိုးဦးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်သစ်ကူးကာလက တော်ဝင်နှင်းဆီ အငြိမ့်မှာလည်း သီချင်းဝင်ရောက် သီဆိုပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဝါဆိုမိုးဦးက သူမရဲ့ body အလှကို သေချာ ထိန်းသိမ်းတတ်သူ …
‘ကြီးလေးကြီး’ မိတ်ဆက်ပွဲက အိန္ဒြာကျော်ဇင်
အိန္ဒြာကျော်ဇင်ဟာ လာမယ့် ၁၉ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်သွားမယ့် ‘ကြီးလေးကြီး’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အထူးပြပွဲ Press Show ကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံအမိုက်စားများကို သူမရဲ့ page မှာ တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ‘ ကြီးလေးကြီး ’ ဇာတ်ကားမှာ သူမကို လူမင်း၊ ခန့်စည်သူ၊ ခိုင်သင်းကြည်တို့နဲ့ အတူ …
သင့်မွေးဂဏန်းမှပြောသော သင့်အကြောင်း ၁ မှ ၉ အထိ ရှိပါသည်။ အတွဲဂဏန်းများ ဆိုလျှင် တစ်လုံးထဲဖြစ်အောင် ပေါင်းပါ။ဥပမာ ၁၇ ဆိုလျှင် ၁+ ၇ = ၈ ဂဏန်းသမားဖြစ်သည်။ ဂဏန်းသင်္ချာဗေဒင်သည် အနောက်တိုင်းနည်းကို အခြေခံထားသဖြင့် မြန်မာ ရက် ၊လ၊ နှစ် …